I-Franchise Partnership: Ukwakha Ubambiswano Olusebenzayo - Wayback Burgers
Siphe ucingo 203-649-3392
I-Franchise Partnership: Ukwakha Ubambiswano Olusebenzayo
Njengoba kwenzeka ekusungulweni kwanoma yiluphi olunye uhlobo lwebhizinisi elincane, umuntu oyedwa osebenza yedwa angase angabi namakhono anele ashukumisayo - noma angase angabi naso isikhathi sokuzinikela ekusebenzeni kwansuku zonke kwebhizinisi - ukushayela impumelelo ye-franchise. . Ngezizathu eziningi , osomabhizinisi abatshala imali ekuvuleni indawo ye-franchise bathatha ozakwethu.
Ngisebenza Kanjani Nozakwethu Ukuze Ngithenge I-Franchise?
Umnikazi owenza umsebenzi wesikhathi esigcwele futhi ofuna ukusebenzisa imali yakhe ukuze avule i-franchise eceleni angase adinge usizo lukazakwethu ozoba nesandla ekuphathweni kwebhizinisi elisha - onikelayo. "i-sweat equity." Noma, mhlawumbe umnikazi oyedwa ungumuntu ongenalwazi kodwa ohlakaniphile ekusebenzeni futhi udinga uzakwethu ophumayo ochwepheshile kwezokumaketha namaphromoshini futhi “ongubuso” bomsebenzi endaweni. Ubudlelwano obuhle buhlanganisa abantu abanamakhono ahambisanayo.
I-Forbes iphakamisa ukwenza ukuhlolwa kobuntu ukuze ubone ukuthi amandla akho akuphi. Uma ungenazo izici ezibalulekile ukuze uphumelele ebhizinisini kodwa unomfutho wokulifinyelela, uzakwethu onamakhono ahlukene ohambisana nobuhlakani bakho noma umbono wakho angaba umbono omuhle.
Njengoba uqala ukubhala uhlelo lwakho lwebhizinisi , Ungase uhlonze izindawo lapho ikhono lakho siqu - noma isikhathi esitholakalayo - singase singambozi lokho okudingeka kwenziwe ukuze lenze i-franchise iphumelele futhi iphumelele. Uma kunjalo, kungase kube yisikhathi sokucabangela ukubambisana kwe-franchise.
Ukubambisana Kungase Kudingeke
Ukuthola ubudlelwano obuhle kakhulu be-franchise kudinga ukucatshangelwa okuthile. Noma ngabe uyisika, ubambiswano oluhle luzobandakanya imisebenzi yokuhlukanisa kanye/noma izindleko nobungozi. Ubambiswano luphinde lusho ukuba nomuntu oseceleni kwakho ozobungaza ukunqoba nempumelelo, kanye nokuba nomuntu oyisifuba ozokusiza ukwabelana ngamagalelo okwehluleka ngezikhathi ezithile.
Ngisho noma uqiniseka ukuthi unakho okudingekayo ukuze ukwenze konke njengomnikazi we-franchise, ungase ungabi nayo imali noma isikweletu sokuxhasa ukutshalwa kwezimali kokuqala kanye nezindleko zokuyigcina iqhubeka kuze kube yilapho ithola imilenze, engase ithathe noma yikuphi ukusuka. izinyanga ezimbalwa kuya eminyakeni embalwa, kuye ngohlobo lwe-franchise.
Kulokhu, ukuletha uzakwethu onemali kungase kudingeke. Ungakuvumeli kulimaze ukuzidla kwakho; akekho usomabhizinisi ophumelelayo owenza konke eyedwa.
Nakuba, ngokombono, ungakwazi ukuletha ozakwethu abaningi ngendlela ofisa ngayo, uma uqoqa abapheki abaningi bezungeza isobho, ngomqondo ongokomfanekiso, liyanda ithuba lokungaboni ngaso linye kanye nokwehlukana kwemibono nokubona, okuholela ethubeni elengeziwe lokuba ubudlelwano buhlakazeke. .
Kufanele Sihlele Kanjani Isivumelwano Sebhizinisi Lethu?
Isisho sakudala sisho kanje: “Akekho oyokwenza okungalungile ebhizinisini njengoba kwenza umndeni noma abangani.” Ngamanye amazwi, kungakhathaliseki ukuthi nizwana kanjani kusenesikhathi nalowo ozoba umlingani wakho, bhalani ubudlelwano uma kwenzeka. Futhi lokho kusebenza kwezezimali kanye nendima yozakwethu ngamunye.
Insiza yochwepheshe bemboni iFranchising.com ixwayisa osomabhizinisi abasebenzisana nabo ukuthi bathembe okuhle ngenkathi behlela okubi kakhulu, echaza, “Kungakhathaliseki ukuthi uthatha hlobo luni lozakwethu (uthule, umndeni, abangani, ukulingana kwangasese, umtshali-zimali oyingelosi) kufanele unqume kuqala. kungakanani ukulawula, uma kukhona, ozimisele ukukuyeka. Kwabaningi, kufika endabeni yesitayela somuntu siqu; abanye abantu basebenza kangcono bebodwa, kungakhathaliseki ukuthi bangase bazame kanzima kangakanani ukwenza okuhlukile.”
Isivumelwano sebhizinisi kufanele sicacise izindima zomuntu ngamunye emsebenzini nokuthi yimiphi imisebenzi okulindeleke ukuba bayenze. Kufanele futhi ibale ukuthi uzakwethu ngamunye utshala ini ngokwezimali nokuthi yimaphi amaphesenti enzuzo nokulahlekelwa ababelana ngakho. Futhi isivumelwano kufanele sibeke obala ukuthi kwenzekani uma ozakwethu benquma ukuhlakaza ubambiswano, noma kwenzekani uma umlingani oyedwa ephula imigomo yesivumelwano.
Uma kufanele ulethe abasekeli bezezimali abambalwa njengozakwethu, kuyancomeka ukuthi isivumelwano sakho sebhizinisi sihlanganise ngokuqondile ukuthi yimaphi amalungelo abanawo ekuthathweni kwezinqumo.
Kutuseka kakhulu ukuthintana nommeli ukuze wenze isivumelwano esifanele - futhi uqondise ozakwethu mayelana nesakhiwo sebhizinisi esingcono kakhulu esingasikhetha - futhi ukuze umlingani ngamunye abe nommeli wakhe osibuyekezayo.
Lokhu Kuzwakala Kubi. Ingabe Kufanele Ngibe Nomaqondana?
Ekugcineni, umnikazi ozethembayo ongadingi usizo lokuthola uxhaso lwezimali ukuze atshale i-franchise, futhi onesikhathi esiningi sokusebenzisa imisebenzi yansuku zonke, angakhetha ukuzimela kokuzihambela yedwa. Kodwa ekugcineni, ngisho nomuntu okuthiwa umnikazi wedwa usajabulela ubambiswano oluzuzisa kakhulu uma ekhetha uhlobo olusunguliwe lwe-franchise - uma ucabanga ngakho.
Ngempela, ukuba yingxenye yohlelo lwe-franchise - nokusebenzisa imali ngokubambisana kwezinhlelo zayo zokusebenza, ukuqashelwa komkhiqizo, ukusekelwa, nokunye okuningi - kuqeda izici eziningi ezesabekayo zobunikazi obubodwa umuntu angase ahlangane nazo ebhizinisini elizimele. Futhi yilokho ukusebenzisana okuphumelelayo nokubambisana okufanele kube ngakho.
I- Wayback Burgers iyi-franchise esekwe e-Connecticut esheshayo nenedumela lamabhega aphekwa ukuze a-odwe kanye nama-milkshake awugqinsi, acwiliswe ngesandla, ahlinzekwa endaweni elalela emuva endaweni nesikhathi esilula - lapho isevisi yamakhasimende isho okuthile, futhi. wonke umuntu wezwa imfudumalo yomphakathi. I-Burger franchise ekhula ngokushesha inika abantu abaqeqeshiwe ithuba lokuvula nokusebenzisa ibhizinisi emkhakheni wezokuzijabulisa ofunwa kakhulu.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngokuthi ungaqala kanjani, vakashela ku- https://waybackburgers.com/franchising/ .
Ake siqale ingxoxo! Qalisa
Buyela ku-Wayback Burgers
Izimakethe Zamazwe Ngamazwe
Imibuzo? Sishayele namuhla!
Ake siqale ingxoxo!
© Wayback Burgers. Wonke Amalungelo Agodliwe